Mitonia… Mahatokia | NewsMada
Tahotra sy horohoro ary tebiteby… Izay ny fiantraikan’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Efa saika ny vahoaka maneran-tany no mikoropaka, miahiahy, mitaintaina satria efa marobe ny olona maty, marary, miady amin’ny fahafatesana vokatry ny aretina.
Tsy mifidy firenena fa na matanjaka na an-dalam-pandrosoana, tongany avokoa. Tsy anavahana volon-koditra fa na mainty na fotsy na mena na mavo, tratran’ny aretina daholo.
Toraka izany ny eto Madagasikara, very fanahy mbola velona, toy ny valala voatango, ny Malagasy. Miandry izay igadonany sisa.
Aza manahy, aoka ho tony… Izany ny fandaminan-tsaina entin’ny fanjakana ho an’ny vahoaka. Efa betsaka ny paikady raisin’ny fanjakana amin’ny fanakanana ny otrikaretina tsy ho tonga eto an-tanindrazana.
Nakatona ny sidina rehetra amin’ireo firenena ahitana izany aretina izany. Mandeha ny fanentanana amin’ny fisorohana rehetra. Arahi-maso akaiky ireo olona avy any ivelany hifehezana ny mety ho fiparitahan’ny aretina raha sanatria misy izany…
Eny, misaotra amin’ny fahendren’ny fanjakana nandray ireo fepetra ireo. Irariana mba tsy ho tafiditra eto tokoa ny aretina. Mankasitraka amin’ny fahasahiana noraisina ho fiarovana ny vahoaka amin’ity loza efa mandondom-baravarana ity.
Mitonia amin’izay ary isika valalabemandry. Efa tsara hidy ny varavarana.Araho antsakany sy andavany ny toromarika rehetra. Aoka izay aloha ny mifamihimpihina sy ny fifandraisan-tanana na ho amin’ny inona na ho amin’ny ahoana. Sasao matetika hadio amin’ny savony ny tanana… Hajao ireo.
Mahatokia fa mahomby ireo fepetra noraisina matoa ampiharina. Azo antoka ny fahampian’ny tahiry ho an’ny filana andavanandro ka tsy hisy ny fiakaram-bidy eny an-tsena. Mahatokia fa efa manao ny asany tokoa ireo mpanara-maso ny vidin’entana ary hanafay ireo mpanararaotra. Mitonia…Mahatokia.
Ny tena zava-misy anefa, mikoropaka ihany ny Malagasy na tsy miseho mivantana aza. Manangona sakafo ireo afaka manao izany. Lany ny ranom-panafody fanasana tanana eny amin’ny farmasia. Toraka izany ny tampim-bava, efa ifarombahana ny toerana izay mety ahitana izany. Misy ihany anefa ireo olona tony tanteraka, indrindra ireo any ambanivohitra, tsy miasa saina…